Masinina manapaka fitaratra, milina manapaka vato voafitaka - Huashili
Fanampiana lavitra an'ny injeniera
Fifantohana amin'ny mpanjifa, mamaha ny teboka fanaintainan'ny mpanjifa.
Fiaraha-miasa mandresy fandresena
Fahatokisana, fanajana, orinasa miaraka, tombontsoa iraisana.
Ny fikatsahana kalitao
Ny kalitaon'ny vokatra no vato fehizoro amin'ny fitomboantsika hatrany.
Huashili teknolojia dia andiam-pikarohana mekanika automatique sy fampandrosoana, fanamboarana, varotra amin'ny iray amin'ireo orinasa mpamokatra teknolojia avo lenta. Ny orinasa dia manan-karena traikefa famokarana fitaovana mandeha ho azy mekanika, fahaizan'ny famokarana, haavo teknolojia ary tanjaka ara-toekarena feno eo amin'ny sehatry ny indostria eo alohan'ny indostrialy anatiny, ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fitaovana mandeha ho azy manan-tsaina, ny fifehezana ny fitaovana, ny fahombiazan'ny fitaovana ary ny maodely efa tany. ny ambaratonga voalohany eto an-toerana, teknika maromaro. nameno ny banga anatiny